Publié février 22, 2019 par Book News
Fototry ny fanabeazana ny teny reny ary ivon’ny fampandrosoan’ny firenena kanefa ny tsy fahafezena ny teny ampiasaina sy fampiasana ny teny mifangaro na teny vary amin’akotry dia mety hitarika tsy fifankazoan-kevitra.
Tsy fahaizana mamoaka ny ao an-tsaina ny fampiasana vary amin’akotry
« Tsy fahafehezan-teny ny fampiasana ny teny mifangaro na ny teny vary amin’ny akotry », hoy ny Raymond Ranjeva, filohan’ny Akademia malagasy, omaly, nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tenin-dreny na tenin-drazana tao Tsimbazaza.
Nankalazaina omaly teny amin’ny Akademia malagasy Tsimbazaza ny andro maneran-tany ho an’ny tenin-dreny na tenin-drazana. cc: Henintsoa Hani
Tsy fahaizana mamoaka ny ao an-tsaina ny fampiasana ny teny vary amin’akotry ary tsy fahaizana miteny velively izany hoy hatrany ity profesora ity nandritra ny lahateniny. Betsaka hoy izy no mihevitra fa ny fampiasana ny teny vary amin’anana dia fanehoana ny fahaizana kanefa diso izany satria ny fampiasan’olona matetika izany teny izany dia tsy fahafatantana sy tsy fahafehezan-ny teny ampiasainy.
Ilaina ny fampiasana ny teny malagasy ho enti-mampianatra sy ibeazana mba hisian’ny fampandrosoan’ny firenena satria izany no foitrin’ny tanjaky ny firenena hoy kosa Dimby Voavolo, Profesora ao amin’ny Oniversiten’i Toliara, nandritra ny famelabelaran-keviny omaly.
Tsy maintsy atao amin’ny teny malagasy ny fampianarana hoy ny filohan’Akademia malagasy satria io no teny iresahan’ny ankamaroan’ny malagasy. Ny teny malagasy no manome ny tontolo iainan’ny malagasy sy fantatrin’ny malagasy raha ny nambarany. Namafisiny tamin’izany ihany fa raha mampiasa ny teny vahiny ny olona iray dia mindrana ny tenin’ny hafa noho izany miezaka izy ny mandika sy mampafantatra ny tiany hampitaina amin’olona iresahany.
Teny tokana ny teny malagasy
« Tsy voatery mampiasa teny samihafa ny malagasy rehefa mifandray sy mifampiresaka fa mampiasa ny teny malagasy ihany “, hoy Esther Randriamamonjy, mpanoratra sady filohan’ny sokajy voalohany, nandritra ny fanehoan-keviny. Nambarany tamin’izany fa anisan’ny mampiray ny Malagasy rehetra ny teny malagasy noho izy maro mpampiasa sy ifankahazoana rehefa miresaka.
Ny fanatontoloana dia tsy misakana ny fampivoaran’ny teny malagasy fa ny fahaizana manome lanja izany no mitondra azy amin’ny fampandrosoany, ary tsy adidiko irery izany fa mitaky adidin’ny rehetra, hoy hatrany ity mpanoratra ity.
Ny teny malagasy no nibeazana sy ibeazana ny Malagasy satria nisy hatrany ny politikan’ny fampandrosoana sy fanabeazana amin’alalan’ny teny reny.
Publié dans Actualités, Culture et sport et Malagasy